PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - THANDI ZONDI
Ilanga - 2018-11-08 - Ezesimanje - Tzondi@ilanganews.co.za
UMUZI MLAMBO ongumnikazi welebuli iMita-N Dzyns esigqokise osaziwayo abaningi uveza ukuthi uwuthatha njengobizo umsebenzi wokuba wumsiki wengqephu. Uthi ungene kulo mkhakha emuva kokuqeda isikole kwazise abazali bakhe bebengenayo imali yokuba aqhubekele phambili nezifundo. “Kakusiwo umkhakha engikhule ngiwuthanda kodwa bengike ngibuke uma umama ethunga. Kwesinye isikhathi bengimhlalisa ebusuku ematasa,” kuchaza uMuzi. Uthi ngokubona ukuthi isikhathi siyaqhubeka akalutholi nosizo lwemali yokufunda, waphoqeleka ukuba athathe umshini wokuthunga asebenze. “Ngabona ukuthi kwesinye isikhathi ngichitha usuku lonke ngingenzi lutho, nga- vele ngadonsa umshini ngathunga ukuze sikwazi ukuthi siphile ekhaya,” kuchaza uMuzi oseke wahlabana ngendondo ye-Emerging Designer of the Year kwiDurban Fashion Fair.
Uthi umsebenzi wokuthunga uwuphiwe ngabantu bakubo abadala.
“Ngahamba ngayothwasela ubungoma kodwa kwachuma ukuthunga, ngingasho nje ngithi wumsebenzi ophuma edlozini,” kuchaza yena. Phakathi kosaziwayo aseke wabagqokisa kukhona uBaby Cele, uSelbyonce, uZodwa Wabantu uNocksy Mabika ukubala abambalwa.
Uveza ukuthi akuthandayo ngomkhakha wezemfashini wukuhlangana nabantu abehlukene nokuhambela imicimbi.
“Engingakuthandi wukuthi lo mkhakha kawuhloniphekile njengeminye, ubukeleka phansi. Kwesinye isikhathi umuntu uke acele ukuba umthungele kodwa uma sewusho inani bese ethi kawumehlisele, angacabangi ukuthi nawe kunabantu okumele ubakhokhele, ukhokhele irenti ngaphezu kwalokho kume- le uphile ngale mali.
“Uma ufuna ukwehluka ungagqoki into yawo wonke umuntu, zimisele nangokukhokha,” echaza.
Kwabafisa ukungena kulo mkhakha, uthi kubalulekile ukuba babenesineke nothando.
“Landela inhliziyo yakho, ube nesineke. Ukuthunga kakuyona into ekuphumelelisa ngobusuku obubodwa, usazowa uphinde uvuke. Okubalulekile wukuthola ukwe-sekwa emndenini.
“Ngaphezu kwalokho kumele uzifundise ukukwazi ukonga nokusebenza nabantu,” kuphetha uMuzi obuye azibize ngomsiki wodidi oluphakeme.
ISITHOMBE: SITHUNYELWE ISITHOMBE YI: INSTAGRAM
UMUZI Mlambo welebuli iMita-N Dzyns. NGENHLA ngomunye wemisiko kaMuzi Mlambo.